Umaka: uyaphendula | Martech Zone
Uma uyi-ejensi noma inkampani enephothifoliyo yamasayithi noma amakhasi ofisa ukuwabelana ku-inthanethi, kungenzeka ukuthi udlule ebuhlungwini bokuzama ukuthatha izithombe-skrini ezifanayo zesayithi ngalinye. Elinye lamakhasimende esisebenza nalo lakha izixazululo ze-Intranet ezingabanjelwa ngaphakathi ngaphakathi kwenkampani. Ama-intranet ayasiza kakhulu ezinkampanini ukuxhumana nezindaba zenkampani, ukusabalalisa ulwazi lokumaketha, ukuhlinzeka
Ukukhangisa ngamaselula kuyaqhubeka nokuba ngomunye wemikhakha ekhula ngokushesha kakhulu futhi eyinselele kakhulu emnothweni wezentengiso womhlaba jikelele. Ngokusho kwe-ejensi yokuthenga yezikhangiso iMagna, ukukhangisa ngedijithali kuzodlula ukukhangisa kwendabuko kwe-TV kulo nyaka (sibonga kakhulu ukukhangisa kwamaselula). Ngo-2021, ukukhangisa kwamaselula kuzobe sekukhuphuke kwafika ku- $ 215 billion, noma amaphesenti angama-72 wesabelomali esiphelele sokuthengwa kwezikhangiso. Ngakho-ke umkhiqizo wakho ungabonakala kanjani ngomsindo? Nge-AI ekhombe impahla kuphela kwendlela